समाचार - सल्यानी खुकुरीको माग बढ्दै, उत्पादनमा समस्या - page 632
सल्यानी खुकुरीको माग बढ्दै, उत्पादनमा समस्या
सल्यान । पछिल्लो समय सल्यानी खुकुरीको माग बढ्दै गएको छ । उपहारस्वरूप दिइने एवम् घरायसी काममा प्रयोग हुनेजस्ता कारणले पनि माग यसको माग बढ्दै गएको हो । जिल्लाको शारदा नगरपालिका–२ विश्वकर्मा टोलमा रहेका १० घरधुरीमध्ये ६/७ घरपरिवारको दैनिकी फलाम पिट्नु, आकर्षक खुकुरी, खुडा, चक्कु, चुलेसी आदि बनाउनु रहेको छ । उनीहरू देशविदेशमै पहिचान बनाएको सल्यानी कुखुरी उत्पादनमा व्यावसायिक रूपमा जुटेका छन् । यहाँ निर्मित सिरुपाते, टोरा ओखोला, टोरा दुईचिरा, हवल्दार, क्षत्री, जीडब्लू, डब्लूडब्लू वान, टू नामक सल्यानी खुकुरी प्रख्यात छन् ।	थप पढ्नुहोस्
उत्रियो बलात्कारविरुद्ध राप्रपाको महिला संगठन सडकमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 'राप्रपा' को भातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले बलात्कार, हत्या, हिंसा, सामाजिक अपराध, दण्डहिनताविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। मंगलबार राप्रपाको महिला संगठनले बबरबहलमा प्रदर्शन गरेको हो। र्‍यालीको नेतृत्व महिला संगठनकी अध्यक्ष कुन्ती कुमारी शाहीले गरेकी थिइन् ।	थप पढ्नुहोस्
इन्डोनेसियाको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेहरूको संख्या १०० पुग्यो
काठमाडौं । इन्डोनेसियाको लोम्बोक द्वीपमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेहरूको संख्या १०० पुगेको छ । इन्डोनेसियाको लोकप्रिय पर्यटकीय प्रान्त लोम्बोकमा आइतबार बेलुका ६.९ म्याग्नीच्युडको भूकम्प गएको इन्डोनेसियाली भूगर्व सर्वेक्षण संस्थाले जनाएको छ । तर अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्था ९युएसजिएस० ले भने यस भूकम्प ७ म्याग्नीच्यूडको मापन गरिएको बताएको थियो । यस भूकम्पको केन्द्रविन्दु लोम्बोकबाट १८ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा जमिनको सतहबाट करिब १५ किलोमिटर गहिरो रहेको बताइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
इलाम । लिम्बुवान प्रान्तीय परिषद्ले आह्वान गरेको बन्दका कारण मंगलबार इलामसहित पूर्वका ९ जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। विक्रम संम्बत १८३१ मा आजैकै दिन पृथ्विनारायण शाहले कपट्पूर्ण सन्धी गरेर लिम्बुवान क्षेत्र खोसेको भएकोले यस दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिंदै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले लिम्बुवान प्रान्तीय परिषदले अरुण पूर्वका नौ जिल्लाहरु झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरी,धनकुटा, तेह्रथुम र भोजपुर जिल्लामा आमहड्तालको आब्हान गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
प्रा.डा. गोविन्द केसी अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने
काठमाडौं । प्रा.डाक्टर गोविन्द केसी मंगलबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने भएका छन् । डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था समान्य हुन थालेपछि डिस्चार्ज गर्न लागिएको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले बताएका छन् । १५ औँ पटक २७ दिनसम्म अनशनमा बसेका कारण केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनशनमा बसेका केसीले सरकारी पक्षसँग सम्झौता भए लगत्तै गएको १० गते अनशन तोडेका थिए । तर सम्झौता गरेको १३ दिन भइसक्दा समेत कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै केसी पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
आगामी भदौ १ देखि अब बच्चाले आमाको गर्भमै अंश पाउने !
काठमाडौं । हालसम्म सगोलको सम्पति बच्चा जन्मिएपछि मात्र भाग लगाउने गरिन्थ्यो तर अब भने बच्चाले आमाको गर्भमा रहँदा नै अंश पाउने भएका छन् । आगामी भदौ १ देखि लागू हुन लागेको मुलुकी देवानी ९संहिता०, २०७५ र त्यससम्बन्धी कार्यविधिमा अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा ती महिलाले जन्माउने शिशुलाई पनि अंश छुट्टयाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । सगोलको सम्पत्तिमा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार हुने व्यवस्था हाल व्यवस्था थियो । तर अब आमा अंशियार भए गर्भको बच्चालाई पनि अंश छुट्टयाउनुपर्ने भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
साउदी अरबिया र क्यानडाबीच कुटनीतिक तनाब : हवाई उडान स्थगित
काठमाडौं । साउदी अरेविया र क्यानडाबीच कुटनीतिक तनाब बढिरहेको बेला साउदी अरेबियाले टोरोन्टोसँगको सम्पूर्ण हवाई उडान स्थगित गरेको छ । क्यानडाले साउदी अरबमा पक्राउ परेका नागरिक अगुवा र महिला अधिकारकर्मीको रिहाइको माग गरेपछि साउदीले पछिल्लो निर्णय गरेको हो । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै क्यानडासँग सबै किसिमका व्यापार र लगानीसम्बन्धी कारोबार रोक्का गर्नुका साथै क्यानडाका राजदूतलाई देश निकाला गरिसकेको छ । साउदी अरेबियामा विभिन्न मानवअधिकारकर्मी पक्राउ परेकामा क्यानडाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेपछि दुई मुलुकको सम्बन्ध चिसिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
भुइँकटहर पोषक तत्वको भण्डार
काठमाडौं । स्वास्थ्यको फाइदाका हिसाबले भुइँकटहरलाई अदभूत फल मानिन्छ । भुइँकटहर पोषक तत्वको भण्डार नै हो । यसमा ब्रोमिलेन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिनी र फाइबर पाइन्छ भने भिटामिनमा ए, सी, बिटा क्यारोटिन, थियामिन, बी ५, बी ६ र फोलेट पाइन्छ । यस्तै, खनिज तत्वमा पोटासियम, कपर, म्यागनिज, क्याल्सियम, सोडियम र म्याग्नेसियम पाइन्छ । यसमा कम क्यालोरी हुने हुनाले तौल घटाउन पनि उपयोगी मानिन्छ। कसले खानु हुँदैन ? भुइँकटहरमा भएको ब्रोमिलेन तत्वका कारण धेरै खाएका बेला दाँत कुँडिन सक्छ ।	थप पढ्नुहोस्
भदौको पहिलो सातासम्म पार्टीको स्थानीय तहसम्म एकता : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भदौको पहिलो साताभित्र एकभई सक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिल्ला तथा नगरस्तरिय उद्योग वाणिज्य सङ्घको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन र्गन पर्साको वीरगञ्ज पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले २५ गतेसम्म तलबाट सुझाव मागेको र सोही सुझावका आधारमा भदौ ५ गतेसम्म पार्टीको स्थानीय तहसम्म एकता भइसक्ने बताएका छन् । अध्यक्षले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा पदपूर्ती गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग हिजोमात्र छलफल भएको स्पष्ट पारे ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । हिन्दु महिलाहरुले सौभाग्यको प्रतीक मानेर लगाउने चुरा पोतेसंग जोडिएको इतिहास धेरै पुरानो रहेको बुढापाकाहरु बताउछन् । कश्मिरको लग्दादबाट नेपाल आएका मुसलमानहरु ३ सय बर्षदेखि आफुहरुले यो व्यवसाय गर्दै आएको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार १६ औँ शताब्दीदेखि भारतबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपाल आएका मुसलमानहरू व्यापार फस्टाउन थालेपछि यतै बसेर व्यापार गरेको बताउछन् । उनीहरुले काठमाडौं मा हिन्दू महिलाहरूले सौभाग्यको प्रतीक मानेर लाउने चुरा र पोतेको व्यापार गर्छन्। यो ठाउँ चुरा र पोतेको लागि निकै प्रसिद्ध मानिन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
« Previous 1 … 630 631 632 633 634 … 947 Next »